Fanavaozam-baovao Lingua: Septambra 2018 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2018 6:39 GMT
K'aiza sy aiza daholo ianareo e! Atolotra anareo ny toetran'ny Lingua tamin'ny Septambra 2018.
Ity ny topi-maso mikasika ny fandehan'ny tranonkala rehetra tamin'ny volana septambra.
Mitombo ny ‘Heloky ny Firaisankina’ ao Eoropa raha nisy olona 11 najoro eo amin'ny fitsarana noho ny fanampiana ireo mpifindramonina avy amin'i Bouchra Laghzali
Manohy amin'ny famoretana ny zon'olombelona i Arabia Saodita, mpikambana iray ao amin'ny vaomieran'ny zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana avy amin'i Maira Mohamed
Claire Ulrich, maintimolaly tamin'ny fandraisana anjara tato amin'ny Global Voices amin'ny teny Frantsay no nametraka fahatsiarovana manokana an'ilay mpikambana ato amin'ny vondrom-piarahamonina Boukary Konate, izay maty tamin'ny Septambra 2017.
Arpan Rachman avy amin'ny Global Voices amin'ny teny Indoneziana nanoratra momba ny foaram-boky ao Jakarta.
Navoakanay ny tatitry ny fiarahamiasa amin'ny Meedan nandika ny siokan'ny #RightsCon.
Nanomboka ny Vaomieram-Piarahamonina GV izahay ary nampiditra ny taratasin-dohahevitra 1 sy 2..
Kristina Edinger, mpandika teny GV espaniola mankany amin'ny teny anglisy, no nanoratra fikafikam-pandikan-teny; Fandikana mialoha sy ny tokotanin-tsehatra manodidina izany, Metalanguage sy Fandaminam-boambolana ary Tenin-jatovo sy Media sosialy